Wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha - BBC News Somali
Wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha
12 Agoosto 2018
Tabobaraha cusub ee Chelsea, Maurizio Sarri, ayaa guushii ugu horraysay soo hooyey oo waxa ay kooxdiisu 3 - 0 kaga badisay Huddersfield. Dhanka kalena waxa iyaguna ciyaarahoodii bilowga ahaa guulo ka soo hooyey kooxaha Crystal Palace, Bournemouth, Watford iyo Tottenham.
Ciyaaryahanka Richarlison ee ay 50 milyan ee Gini kula soo wareegtay ayaa kooxda Everton waxa uu u dhaliyey goolkii ugu horreeyey ee ay ciyaarta ku hogaaminaysay hase yeeshee Ruben Neves ayaa goolkii barbar dhaca ahaa u dhaliyey kooxdii ay wada ciyaarayeen ee Wolves. Waxaanay ku kala baxeen barbarro hal iyo hal ah.
Dhanka kalena kooxda Real Madrid ayaa wararku sheegayaan in ay wado qorshe ay doonayso in ay weeraryahanka Eden Hazard kagala wareegto kooxda Chelsea lacag dhan 200 milyan oo Gini iyo sidoo kale in ay quudaraynayso ciyaaryahanka Chirstian Eriksen hadii ciyaaryahankeeda reer Croatia ee Luka Modric ku adkaysto inuu u wareego kooxda Inter Milan ee Talyaaniga.
Ciyaarhaa aadka loo xiisaynayo ee maanta dhici doonana waxa ka mid ah:
Arsenal iyo Manchester City
Liverpool iyo Westham